अमेरिकामा बस्नखान अत्यन्तै सुलभ र सस्ता १० राज्यहरू - Enepalese.com
अमेरिकामा बस्नखान अत्यन्तै सुलभ र सस्ता १० राज्यहरू
इनेप्लिज २०७२ मंसिर १६ गते १३:५८ मा प्रकाशित
अवसरको मुलुक, सपनाको मुलुक र स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको मुलुकको रूपमा परिचित संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० वटै राज्यहरू सबै उस्तै छैनन् । समग्रमा बस्न, खान तथा जीवन निर्वाहका लागि उस्तै उस्तै देखिए पनि विभिन्न राज्यहरूको अवस्था, जीवनशैली, खर्च, घर खरिद, आम्दानी, जागिर, स्वास्थ्य, यातायात, सुविधा तथा बस्न लाग्ने खर्च फरक छन् । कहिँ महंगो छ त कतै अत्यन्त सस्तो छ । आर्थिक बृद्धिदर सूचकांक तथा जीवनशैली ग्राहस्त सबैको मापनलाई हेर्दा फरक फरक छ । राज्य, सहर र ठाउँहरूमा भिन्नता छ । आज यस लेखमा अमेरिकामा खान, बस्न, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, पानी, फोनको बिललगायत जीवन निर्वाहका लागि सस्तो १० राज्यहरूका बारेमा उल्लेख गरेको छु । सस्तो र सुलभ बसाइका सस्ता राज्यहरूमा हुने गरेका अपराध, हावापानी, मौसम, उपलब्ध शिक्षा तथा रोजगारीको अवस्थाका बारेमा चाहिँ यस प्रकारको सूचकांकमा उल्लेख गरिएको छैन । यी राज्यहरू शिक्षाका क्षेत्रमा सामान्य भए पनि हावापानी र मौसममा भने असामान्य पाइन्छ । अब पढौं, अमेरिकामा सस्तो र सुलभ राज्यमा कुन कुन पर्दछन् र के कस्तो छ त्यहाँको अवस्था ? अपराधका घटनाहरु यि १० मध्य केहिमा अत्यधिक छ भने केहिमा कमि।
१. मिसिसिपीः– बत्ती, पानी, बिजुली, उर्जाको खपतको खर्चको सूचकांक ८० भन्दा कम रहेको छ । ग्रोसरी, घर तथा स्वास्थ्य मापन ९९ भन्दा कम, सहरी क्षेत्रमा सरदर घरको मूल्य दुई लाख ४८ हजार डलर, ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख १० हजार डलर छ भने राज्यकै बिजुली बत्ती, पानी कर एक सय २३ डलर छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २ सय ५० डलर देखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५०० डलर देखि ५५० डलरसम्म पर्न आउछ​। यो अन्य ठुला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो।
२. नेब्रास्काः– यो पनि दोश्रो सस्तो राज्यका रूपमा छनौट भएको छ । घरको मूल्य सहरी क्षेत्रमा दुई लाख ६० हजार डलर र ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख २० हजार डलर रहेको छ । पानी र बत्तीका लागि लगभग एक सय २७ डलर रहेको छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५५० डलरसम्म पर्न आउछ​। यो अन्य ठुला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो।
३. केन्टकीः– यो तेश्रो सस्तो राज्यका रूपमा रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य दुई लाख ३२ हजार डलर छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ३० हजार डलर रहेको छ । यहाँ बिजुली बत्ती र पानीको कर एक सय २३ डलर छ ।एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५५० डलरसम्म पर्न आउछ​। यो अन्य ठुला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो।
४. अर्कान्सस्ः– यो राज्य अमेरिकामा बसाइका लागि चौंथो सस्तो राज्यका रूपमा पर्दछ । सेवा, सुविधा तथा खर्चमा यो राज्य अमेरिकाका अन्य राज्यहरूभन्दा ११ प्रतिसत सस्तो राज्यका रूपमा पर्दछ । यहाँ करको दर अत्यन्तै कम छ । सहरी तथा नगर क्षेत्रमा घरको मूल्य तीन लाख दुई हजार डलर पर्दछ भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ४० हजार डलर पर्दछ । बिजुली बत्ती, पानीको कर मासिक एक सय ३४ डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५५० डलरसम्म पर्न आउछ​।
५. आइडहोः–यो सस्तो बसाईको पाँचौं राज्यमा पर्दछ । बिजुली बत्ती, पानीको सूचकांक एकदमै कम छ । घरको मूल्य सूचकांक ८४ रहेको छ । यातायात तथा ग्रोसरीको सूचकांक ९५ भन्दा कम रहेको छ । यहाँ सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य दुई लाख ५६ हजार डलर छ । ग्रामीण तथा सहरबाहिरका क्षेत्रमा एक लाख ३५ हजार डलर रहेको छ । यहाँ बिजुली बत्ती, पानीको मासिक खर्च सरदर एक सय ४६ डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५५० डलरसम्म पर्न आउछ​।
६. आइवाः– यो छैठौं सस्तो राज्यका रूपमा पर्दछ । खाना तथा बसाइ अन्य राज्यहरूमा भन्दा ११ प्रतिसत कम छ । हाउजिङ तथा युटिलिटी सूचकांक ९० भन्दा तल र यातायातको सूचकांक ९१ भन्दा तल छ । यहाँ सहरी क्षेत्रमा घरहरू सरदर दुई लाख ४० हजार डलर तथा ग्रामीण भेगमा एक लाख ४० हजार डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५५० डलरसम्म पर्न आउछ​। यो अन्य ठुला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो।
७. टेक्सासः– यो सातौं सस्तो राज्यमा छनौट भएको छ । टेक्ससको सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य सरदर दुई लाख ३९ हजार डलर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ६० हजार डलर पर्दछ । यहाँ बिजुली बत्ती, पानीको मासिक खर्च सरदर एक सय ५१ डलर पर्दछ । हाउजिङ तथा युटिलिटी सूचकांक ९० भन्दा तल छ भने ग्रोसरी, यातायात तथा स्वास्थ्यको सूचकांक लगभग ९५ रहेको छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ४०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ७०० देखि ८०० डलरसम्म पर्न आउछ​।
८.ओक्लाहामाः– यो अमेरिकाको आठौं सस्तो राज्यका रूपमा रहेको छ । ओक्लाहामामा सहरी क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य दुई लाख ६५ हजार डलर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ३० हजार डलर पर्दछ । यहाँ उर्जा तथा युटिलिटी खर्च मासिक एक सय ४९ डलर पर्दछ । ग्रोसरी, उर्जा तथा यातायातको खर्चको सूचकांक ९८ भन्दा कम रहेको छ ।एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २९० डलर देखि । शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५०० डलर देखि माथि डलरसम्म पर्न आउछ​। काम नपाएमा वा काम नगरिएको देखिएमा सरकारि सुबिधा अन्तर्गत महिनाको ५० डलर देखि १०० डलरसम्मको सरकारि सामाजिक सेवाका एपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध छन​।
९. टेनेसीः– यो अमेरिकाको नवौं सस्तो राज्यका रूपमा रहेको छ । यहाँको युटिलिटी सूचकांक ७९, घरको सूचकांक ८८ र स्वास्थ्य तथा यातायातको सूचकांक ९० रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य दुई लाख ११ हजार डलर पर्दछ । त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य एक लाख १५ हजार डलर पर्दछ । बत्ती तथा पानीको मासिका खर्च सरदर एक सय ४६ डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २९० डलर देखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५०० डलर देखि माथि डलरसम्म पर्न आउछ​। काम नपाएमा वा काम नगरिएको देखिएमा सरकारि सुबिधा अन्तर्गत महिनाको ५० डलर देखि १०० डलरसम्मको सरकारि सामाजिक सेवाका एपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध छन​।
१०. क्यानसासः– यो दशौं सस्तो राज्यमा पर्दछ । क्यानसासको सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य सरदर दुई लाख ६१ हजार डलर पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य एक लाख ४१ हजार डलर रहेको छ । यो राज्यमा घर तथा उर्जा खर्चको सूचकांक ९० भन्दा तल छ । त्यसैगरी यातायातको सूचकांक ९२ र स्वास्थ्यको ९५ रहेको छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा निम्नतम २ देखि ३ बेडरुम​, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २९० डलर देखि । शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५०० डलर देखि माथि डलरसम्म पर्न आउछ​। काम नपाएमा वा काम नगरिएको देखिएमा सरकारि सुबिधा अन्तर्गत महिनाको ५० डलर देखि १०० डलरसम्मको सरकारि सामाजिक सेवाका एपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध छन​।
सरकारि प्राथमिक बिध्यालय​, निम्न माध्यमिक बिध्यालय तथा माध्यमिक बिध्यालय अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने हुन्छ भने साना बस्ति तथा गरिब बस्तिमा सरकारि बढि अनुदान लिएका यस्ता बिध्यालयमा शिक्षाको अबस्था, गुणस्तर र प्रबिधि ठाउ अनुसार छन यि सर्बसुलभ राज्यहरुमा भने रोजगारि तथा कलेजहरु को गुणस्तरियता पनि राज्य पिच्छे फरक छन​। स्तो, सुलभलाइ हेर्दा साउथ क्यारोलिना, नर्थक्यारोलिना, जर्जिया, फ्लोरिडा तथा वेष्ट भर्जिनिया पनि उस्तै उस्तै हुन तर जिबनशैलि, कर तथा बिभिन्न शहरहरुको बस्तुस्थिति फरक फरक हुदा घर​, स्वास्थ्य​, यातायात​, बत्ति, पानि बिजुलि, रोजगारको मुल्य​, खर्च र खपत पनि फरक फरक छन​। अब बाकि चाहि सर्ने, नसर्ने, ति राज्यहरुमा जाने नजाने र कमाएर खर्च गर्ने कि बचत पनि गर्दै जाने तपाइहरुकै हातमा।